Taxanaha Apple Watch 8 wuxuu lahaan lahaa naqshad la mid ah Taxanaha 7 | IPhone news
Taxanaha Apple Watch 8 wuxuu lahaan lahaa naqshad la mid ah kan Taxanaha 7
Taas ulama jeedno wakhti kasta in saacadaha Apple ay yihiin kuwo fool xun, oo ka fog. Qaabka hadda ee Apple Watch Series 7 ayaa yimid ka dib warar xan ah oo isdaba jooga oo saadaaliyay isbeddello is-daba-joog ah oo qurux badan oo aan ugu dambeyntii imaan. Hadda ka dib dhowr maalmood oo suurtagalnimada in nooca Apple Watch ee soo socda uu ku daro isbeddelka naqshadeynta ayaa la tixgeliyey @LeaksApplePro weheliso iDropNews xir albaabka wax ka beddelka naqshadeynta.
Runtii ma lagama maarmaan ma tahay in la beddelo naqshadeynta?
Mid ka mid ah shakiyada in badan oo isticmaalayaasha Apple ah ayaa si sax ah arrintan ku saabsan, waa lagama maarmaan in la beddelo naqshadeynta? Baahida loo qabo in la beddelo naqshadeynta saacaddu kuma habboona qof walba waana in moodooyinka hadda jira ay yihiin kuwo aad u fiican oo raaxo leh oo lagu xiro. Waxaan u maleynayaa in moodelkan ugu dambeeyay uu yahay mid qumman oo uu socon karo dhowr sano ka hor inta aysan go'aansanin inay beddelaan naqshadeynta kiiska. Waxay leedahay shaashad weyn, waxay bixisaa qaab naqshadeed oo la mid ah moodooyinka ugu horreeya laakiin aad u khafiif ah oo ka sarreeya wax kasta oo ka sii xoog badan.
Ku darista naqshad labajibaaran oo dheeraad ah sida lagu arkay bandhigyada qaar toddobaadyo ka hor ayaa laga yaabaa ama laga yaabo inay jeclayn, kama wada hadli doono hadda, waxa aan ka hadli karno waa sawirro CAD ah oo la sii daayay oo loo maleynayo Apple Watch Series 8 oo muujinaya waxoogaa yar. isbedel ku model hadda. Qiyaastii Waxa kaliya ee aan aragno ka duwan waa naqshadeynta afhayeenkaWaan arki doonaa waxa dhaca bilaha soo socda iyadoo ay jirto waddo dheer oo ka hor imaatinka jiilka cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Taxanaha Apple Watch 8 wuxuu lahaan lahaa naqshad la mid ah kan Taxanaha 7
Satechi waxa uu leeyahay dallad ku habboon MagSafe 3-in-1 ee iPhone, AirPods iyo Apple Watch
Isbarbardhigga u dhexeeya kala dirida AirPods 3 iyo Beats Fit Pro